» कति ढुक्क कुरा !
कति ढुक्क कुरा !
१० माघ २०७६, शुक्रबार १३:२४
जगजाहेर छ– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू १२ वर्षअघि भारतमा गरिएको मिर्गौला प्रत्यारोपणको समय घर्किएपछि अहिले नियमित डायलसिस गरिरहनुभएको छ । अत्यन्त जोश, जाँगर र पहिलाभन्दा फूर्तिका साथ बोल्ड निर्णय गरेर अहोरात्र काम पनि गरिरहनुभएको छ । यही कुराको झल्को शुक्रबार र शनिबार लगातार दुई दिन सम्पन्न सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीको बैठकमा ढुक्कका साथ जवाफ दिएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगो लगाउनुपर्ने उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिकरण सुनेर विपक्षीहरु जिब्रो नै टोक्ने स्थितिमा पुगेका थिए ।
मीनेन्द्र रिजालले शुरुमै ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य कस्तो छ ?’ भनेर सोधे । प्रमले फूर्तिसाथ ‘इट्स ओके !’ भनेपछि मीनेन्द्रमात्र हैन, भएजति सबै झसंग भए । उहाँले भन्दै जानुभयो, ‘उही नियमित डायलासिस गरिरहनु पर्ने झण्झट मात्रै हो । ट्रान्सप्लान्ट भनेको त डोनरबाट ल्याएर ट्याक्क राख्नेमात्र न हो । द्याट्स सिम्पल !’
प्रमको यस्तो दृढ निश्चयी जवाफ सुनेपछि प्रतिपक्षीहरु चर्चा गर्दै थिए, ‘हाम्रोमा कुकुरले छ्यास्स चिथोर्दा पनि के के न बितेझैं कुदाकुद गरेर हस्पिटल गई रेबिजको खोप लगाउने र हप्तौं घरमै आराम गर्ने कुरा हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री अहिले त यस्तो छन् भने अझ स्वस्थ्य हुन्थे भने कति जोश र जाँगरका साथ काम गर्थे होलान् ?’ त्यहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण कहिले हुन्छ भनेर त सोधिएन । तर, कामको फूर्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री अड्किएर बसेका थुप्रै निर्णयलाई यस्तै जाँगर, सहमति र सहकार्यका साथ सम्पन्न गर्ने मुडमा देखिनुभएको छ ।